riots | GAZETY_ADALADALA
Posted on 11/03/2009 by gazetyavylavitra
Nifamotoana teny amin’ny kianjan’ny 13 mai ny mpomba an’i Andry Rajoelina androany, raha teny Mahamasina kosa ireo mpomba an-dRavalomanana Marc. Nilamina tanteraka ny testy Analakely, saingy asa izay nahazo ireto mpomba ny TIM sy ny fitondrana , fa nilaozany i Mahamasina ary niakatra ho eny Ambatomena ry zareo. Hanao sit-in eo anoloan’ny consulat sa Ambasady frantsay, hono. Asa na fantany na tsia fa toy ny manafika firenena iray any an-taniny izy amin’izany. Sa tsy fantatr’ireo mpitarika izany zavatra izany?
Miala tsiny fa ny sary momba izay rehetra izay dia nofafan’ny mpitandro filaminana tao anaty fakan-tsary tety an-tanako, satria tsy te-halaina sary,hono, izy ireo, eny fa na dia ny lamosiny fotsiny aza no azoko sary raha naka sary ireo mpomba ny TIM avy ao aorian’ny rindrina nataon’ireo miaramila tonga nanasaraka ny mpifanandrina aho. Fiangaviana mafy vao naveriny ilay fakan-tsary, saingy dia io tsy maintsy nofafana teo imasony io ny sary rehetra tao. Ny antony dia satria tsy taty amiko ny karatro. Tsy olana iny fa mbola misy ihany ny azo nalaina taorina’izay ka atolotra anao
Nisy saiky hanita-kevitra anefa ireto avy any Mahamasina ireto,ka saika hidina ambanimbany kokoa taty akaikin’ny Restaurant Toko telo. Naheno izany ny teo amin’ny kianjan’ny 13 mai dia namarana hainga sy talohan’ny fotoana ny famoriam-bahoaka nataony. Ary dia lasa ireo minisitry ny tetezamita.
Ireo vahoaka kosa nandeha nitsena iretsy avy any Mahamasina teo anoloan’ny Conforama sy taty akaiki’ny Air Madagascar Ambatomena.
Mijoro, vonona hanohana hatramin’ny farany ny ara-dalàna ary hanohitra ny fanonganam-panjakana sy ny fandrobana miseho amin’ny endriny samihafa ireo olona marobe tonga teo anoloan’ny kianjaben’i Mahamasina androany.
Tsy mankasitraka ny fitsabahan’ny firenen-kafa hatramin’ny firenena mikambana amin’ny raharaham-pirenena ry zareo, araka ny fandraisam-pitenenana samihafa natao. Mikasika ny zava-misy eo anivon’ny tafika malagasy amin’izao fotoana izao dia nambaran’ireo olona manohana ny Filoham-pirenena Ravalomanana Marc fa tokony hijoro hatrany hiaro ny vahoaka sy ny fananany izy ireo. Ny fikomiana ataon’ny miaramila ao amin’ny CAPSAT dia tondroin’ireo olona ireo ho fanohanana ny fanonganam-panjakana. Nanomboka tamin’ny sivy maraina moa no tonga eny Mahamasina ireo olona maro namaly ny antso natao taminy. Tamin’ny folo ora maraina kosa no nanomboka ny fandraisam-pitenenana sy ny fifanentanana samihafa. Voaresaka matetika nandritra ny lahateny nifandimbiasana tao ny filazana fa mitongilana amin’ny ankolafin-kery manohitra ny fitondrana ny FFKM, indrindra ny filohany, Mgr Odon Razanakolona. Nambaran’ireo mpitarika ny hetsika ho fankatoavan’ity filoham-piangonana ity ny fandrobàna sy ny herisetra ataon’ny andian’olona manakorontana sy mandroba tranombarotra ny fanakanana ny EMMO/NAT tsy handray ny andraikiny amin’ny fanenjehana azy ireo. Ankoatra izay, mikasika ilay hoe fitsabahan’ny vahiny amin’ny raharaham-pirenena, dia nambaran’ireo mpandaha-teny teny Mahamasina fa ny frantsay no tena miditra be loatra amin’ny raharahan’i Madagasikara hatramin’izay ka hatramin’izao ka tsy ekena. Tamin’ny 12 ora antoandro teo moa dia nitanjozotra nihazo ny ambasadin’ny Frantsa eny Ambatomena ireo olona maro tonga teo anoloan’ny kianjaben’ny Mahamasina. Fa isan’ny taratra teny Mahamasina ihany koa ny fikasihan-tànana mpanao gazety manao ny asany ara-dàlana.
Izay ny teny Mahamasina, fa teny amin’ny kianjan’ny 13 mai koa dia misy ny hetsika nataon’ireo mpomba an’Atoa Andry Rajoelina. Rehefa vita ny fotoam-pivavahana toy ny mahazatra teo amin’ny kianjan’ny 13mai dia nanomboka niditra podium ireo mpanao pôlitika ary nihatrana teo amin’ny toerana mahazatra azy ireo mpiambina eny amin’ny toeram-pikabariana. Rehefa nanokatra ny fanentanana toy ny mahazatra Atoa Sareraka dia nilaza mazava fa tsy tokony ho taitaitra isika raha misy fiarakodian’ny zandarimariam-pirenena anankiroa miditra sy misodisody eto amin’ny kianjan’ny 13mai androany. Tsy inona akory ireny, hoy ihany ity mpanentana eo amin’ny kianjan’ny 13mai ity, fa zandary hiambina antsika amin’ny fanakorontanana. Talohan’izay moa dia efa nisy kamiaon’ny miaramila nandalo ihany koa teny amin’ny faritra manodidina an’Analakely. Nahafaly ny olona teny analakely izay fanambaran’ny mpanentana Sareraka izay ary nisy aza no niteny fa eo amin’ny fitaratra alohan’ny fiarakodia na ny pare-brise dia misy soratra hoe FIGN izay azo alavaina hoe: Force d’Intervention de la Gendarmerie Nationale. Fahefatr’adiny taorian’izay anefa dia niely ny tsaho tao Analakely fa nisy mpitandro ny filaminana miala any efa miazakazaka be mihitsy ary handrava ny ao amin’ny 13mai. Nifandrombahana ny bus teo ambadiky ny Intsitut. Tsy fantatra hoe inona no hitranga. Eo amin’ny 13mai sy ny manodidina azy teo Analakely, tony dia tony ny fahitana azy. Fa ny tany Ambodifilao sy ny tany amin’iny ambadiky ny firaisana I iny dia nisahotaka ny olona, nanangon’entana ny mpivarotra. Vetivety toa hoatran’ny tsy misy inona, vetivety eo indray anefa dia miaraka mirona mankatsy sy mankaroa tsy fantatra intsony izay atao sy izay aleha. Nilamina ihany anefa nony farany tamin’ny faritra Avaratry ny 13mai iny. Fa nisy ihany kosa anefa ny sahotaka tamin’ny ilany Atsimo tamin’ny 13mai satria nifandona ny samy sivily mpomba an’Atoa isany Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina androany antoandro teny Ambatomena, manakaiky indrindra ny masoivoho frantsay.
Rehefa avy nivory teny Mahamasina ny mpomba an’Atoa Marc Ravalomanana dia nikasa hanao sit-in teo anoloan’ny masoivoho frantsay teo Ambatomena satria moa dia nilaza ny tsy hanaiky ny fampiantranoan’ny masoivoho frantsay an’Atoa Andry Rajoelina ireo mpomba ny filoha. Nambaran’izy ireo moa fa mpampihorohoro Atoa Andry Rajoelina ka tsy mendrika ny ho arovana. Tamin’ny 12 latsaka fahefany teo no tonga teny Ambatomena ireo mpanaradia ny filoha ireo. Ny vahoaka teo amin’ny kianjan’ny 13mai kosa 15mn alohan’izay no nahare io vaovao io ka avy hatrany dia niakatra teny Andohan’Analakely manoloana ny Select Hotel nanao ny sakana. Nanampy azy ireo ny miaramilan’ny CAPSAT. Atao moa izany sakana izany sao midina eny amin’ny kianjan’ny 13mai ireto mpanara-dia an’Atoa Marc Ravalomanana ireto. Raha vantany vao tazan’ny vahoaka teo amin’ny kianjan’ny 13mai midina iny Antaninarenina iny avy aty amin’ny BOA aty ambany ireo vahoaka avy any Mahamasina dia efa samy naka kobay. Ny sasany nanongotra ireo vy natao fefy teo amin’ny zaridaina teo Analakely, ny sasany nivimbina vato. Niroso nankeo Ambatomena teo amin’ny fiantsoanan’ny fiara mpitatitra 115 ny vahoaka teo amin’ny 13mai tamin’ny 1 latsaka 10 teo ho eo. Nanakana azy ireo ny miaramilan’ny CAPSAT hisakana ny fifandonan’ny roa tonta. Nisy tamin’ny vahoakan’ny 13mai anefa no tafaporitsaka niankandrefana nihazo ny làlana miakatra any Ambatomena amin’iny misy ny Music Box sy Air Mad iny. Velona teo ny fifampihantsiana teo amin’ny mpomba ny roa tonta. Ny mpomba ny fitondràna eo amin’ny arabe ambany kelin’ny masoivoho frantsay, ny mpomba ny mpanohitra tety amin’ny hotely Mavo eo ambanin’ny Music Box. Tamin’ny 1 ora latsaka dimy teo, raikitra ny tora-bato sy ny vely kobay. Na dia teo anelanelan’ny mpifanandrina aza ireo miaramilan’ny CAPSAT dia tsy nahasakana ny fifandonana satria vitsy an’isa izy ireo. Ireto miaramila ireto rahateo dia tsy nampiasa hery, tsy nanapoaka basy. Naharitra teo amin’ny dimy minitra ny fifanjevona. Vaky nandositra ny ampahan’ny mpomba ny fitondràna, nijanona ihany anefa ny fifandonana taorian’izay satria nisy ny mpomba ny andaniny sy ny ankilany samy nampitony ny vahoakany avy. Nanampy tamin’ny fandaminana ihany koa moa ny miaramilan’ny CAPSAT. Tamin’ny 1 ora 15 teo, tonga ny pôlisy iray kamiao hanatevin-daharana ny CAPSAT saingy efa nilamindamina ny teny Ambatomena sy Tsaralalàna tamin’izay fotoana izay. Tamin’ny 1 h 20 mn teo moa vao niala teo Ambatomena sy Tsaralalàna ny mpomba ny andaniny sy ny ankilany. Tsy tapitra teo anefa ny raharaha fa niverina teo amin’ny kianjan’ny 13mai indray ny mpomba an’Atoa Andry Rajoelina tamin’ny 1 h 25mn teo. Rehefa nivorivory sy nikaon-doha teo dia nilaza fa handeha ho any an-tranon’ny PDS Atoa Guy Rivo izay lazain’izy ireo ho lohandohany amin’ny mpanarama ireo antsoina hoe Gros Bras mpanakorontana. Marihana moa fa efa nifarana tanteraka ny famoriam-bahoaka teo amin’ny kianjan’ny 13mai tamin’izay fotoana nivorivorian’ny mpomba an’Atoa Andry Rajoelina ireo izay.
Rehefa izany dia lasa namonjy an’Ampasampito ireo olona vorovory teo amin’ny 13 mai taorian’ny famoriaùm-bahoaka ireo ary dia toy izao ny tatitra an-tsary. Tsy an-kiteniteny
Harahinao ary ambany ary kosa ireo karazana fanambaràna maro samihafa, avy amin’ny ankolafin-kery samihafa.
Ireto ireo karazana fanambaràna
…Tokony hitsahatra amin’izay izao krizy andalovan’ny firenentsika izao. Be loatra ireo olona efa nitondra faisana, maro ny aina nafoy,ary maro ny lasa lavo(???). Ny laza malagasy mihitsy no voatohintohina. Tsy azo ekena fitavozan’ny toe-draharaha. Tsy vahaolana velively ny fandrobàna sy ny asa fanakorontanana,tsy tia herisetra isika malagasy. Tokony hifampihaino, hifampidinika, ary hifanaja isika ahafahana mamaha ny olana haingana. Ankehitriny, fantatra eran’izao tontolo izao i Madagasikara: ny ezaka nataony amin’ny fanamafisana ny demokrasia, sy noho izy nifidy ny lalan’ny fampandrosoana haingana sy maharitra. Satria isika mandala ny demokrasia, dia zava-dehibe ny fanajana ny lalam-panorenana. Masina ny lalam-panorenana ka tokony hajaina. Ary mbola averiko eto indray fa efa nanao fianianana aho fa hanaja ny lalam-panorenana toy ny anak’andriamaso. Hitodika aminareo izay tsy mitovy hevitra amiko aho, aoka isika hanaja ny lalam-panorenana. Io no lalàna ambony indrindra eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Nho izany dia mbola averiko ihany ho antsika: aoka hitsahatra ny asa fanakorontanana, rehefa ny lalam-panorenana sy ny andrim-panjakana, ny repobilka no voatohintohina dia demokrasia sy fananganana firenena tena vanona no voatohintohina. Mbola marefo ny demokrasia eto Madagasikara ka tokony ho arovana. Tiako hanana ny maha-izy azy ka handray anjara mavitrika amin’ny fampandrosoana ny ankolafin-kery rehetra eto Madagasikara. Nefa tsy maintsy ao anatin’ny fanajana ny lalàna izany. Amin’ny maha Filohan’ny Repoblika ahy, dia tsy maintsy mijery ny tombotsoan’ny malagasy rehetra aho. Ry vahoaka Malagasy, holazaiko aminareo ny tena ato am-poko, am-panetren-tena lehibe no anaovako izany. Tiako ho fantatrareo, raha nisy tsy nety nataoko, izay no maha-olombelona ahy. Nefa soa lavo hahay hamindra. Raha misy heverinareo fa hadisoana nataoko, dia raisiko ho andraikitra izany. Ho anareo izay mahatsiaro fahatezerana, azoko tsara ny fahatezeranareo. Miara-ory aminareo aho ary tsapako ny fangirifirianareo. Tiako ny hilaza aminareo fa vonona ny hiaino anareo aho. Ary manome toky aho fa handray fepetra, hitady vahaolana amin’izay zavatra hitarainanareo. Zava-dehibe ny fihaonana sy ny fifanakalozan-kevitra nasionaly ho ataontsika manomboka ny alakamisy ho avy izao ary haharitra telo andro. Manantena isika rehetra fa hitondra vahaolana haingana amin’izao disadisa misy eto amin’ny firenentsika izao izany fihaonana nasionaly izany. Mijoro aho ankehitriny amin’ny maha-Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara ahy. Averiko indray fa mandala hatrany ny firaisam-pirenena aho, ny firaisan-kinam-pirenena ary ny demokrasia. Hiasa miaraka isika satria ny tanjona dia ny fampandrosoana ity tanindrazana malalantsika ity sy ny fanatsaràna ny fiainana isan-tokatrano. Masina ny tanindrazana. Homba antsika mandrakariva anie Andriamanitra.
Fanambarana avy amin’ny Foloalindahy (tafika):
Eo alohan’izao olana lalina ara-politika mahazo ny firenena izao, izahay folo alin-dahy, miaramila, zandary, ary polisim-pirenena dia manao izao fanambarana izao:
Mba hiarovana ny tombontsoa ambonin’ny firenena sy ny firaisam-pirenena, mba hitandrovana ny maha-iray tsy mivaky ny folo alin-dahy dia, voalohany : Manamafy ny fanajana tanteraka ny soatoavina demokratika repoblikana eo amin’ny fanatanterahana ny asa ao anatin’ny fanoavana tanteraka ny lalàna velona sy ny fitsipi-pifehezana manan-kery. Manameloka tanteraka ny fanapotehina ny fiarian-karena, ny fiaraha-monina ary ny firaisan-kina ny folo alin-dahy noho ny olana ara-politika misy eto amin’ny tanindrazana.
Fahatelo: Atsahatra tanteraka ireo fiantsiana sy hetsika politika ary fanaovana amboletra izay miteraka korontana. Koa noho izany, manome toky izahay fa tsy hiandany atsy na aroa ary manainga am-panajana ireo tompon’andraikitra politika, ny hery politika rehetra, ny fiaraha-monim-pirenena ary ny solotenan’ny hery velona samihafa eto amin’ny firenena hihaona tsy misy hatak’andro ary hifanaraka ka hitondra vahaolana ao anatin’ny 72ora hivoahan’ny firenena amin’izao krizy izao. Raha toa ka tsy misy ny vahaolana ao anatin’io fe-potoana io dia handray ny andraikitra izahay folo alin-dahy amin’ny fampandehanana ny raharaham-pirenena, ny tombontsoa ambonin’ny firenena sy ny firaisam-pirenena.
Fanambaran’ny Collectif des Officiers de Diégo
Eo anatrehan’ny toe-draharaha misy eto amin’ny tany sy ny firenena, ary amin’ny maha-tompon’andraikitra feno ny tafika malagasy sy ho fiaraha-mientana amin’ireo namanay dia manao izao fanambarana izao izahay eto amin’ny Collectif des Jeunes Officiers de la Garnison d’Antsiranana.
Voalohany: izahay miaramila dia miaro ny vahoaka sy ny fananany ary tsy miandany amin’ny firehana pôlitika.
Faharoa: Manameloka ary tsy handefitra mihisy amin’ny fandrobana.
Fahatelo: Manohitra sy manameloka ny fampiasana ny miaramila ho hery famoretana ny vahoaka.
Noho izany, tsy ekena intsony ny fampiasana miaramila amin’ny tsy rariny. Ho an’ny tanindrazana.
Antsiranana, faha 9 mars 2009.
Fanambaràna avy amin’ny Masoivoho Amerikana miasa sy monina eto Madagasikara:
En tout cas, bon si je consens bien un peu les affrontements collectifs qu’il y a eu aujourd’hui, entre les pro-TGV et les pro-TIM concernés en ces questions. Et justement j’étais très très choqué de voir les gens réagir devant une ambassade de pays ami, aujourd’hui. C’est comme si les gens pensent qu’on est partisan dans cette affaire….Mais pas partisan, nous voulons aider Madagascar à trouver une sortie de la crise et nous pensons que le principe de protéger un des gens qui est essentiel à la réussite de la négociation est un principe important que nous partageons. Je crois que tout le monde en est conscient que Madagascar traverse vraiment un moment très difficile et nous, communauté internationale, moi, ambassadeur des USA, nous avons tous oeuvrés depuis des semaines et des semaines pour arriver… On est à la veille des assises malgaches qui vont commencer cette semaine. Je crois que vraiment ce sont les négociations de la dernière chance. Donc nous félicitons le travail du FFKM et les Nations Unies. Nous avons constaté avec beaucoup d’appréciation l’appel qui a été lancé hier par le FFKM, nous pensons que cette trève est la meilleure façon pour tous les malgaches de contribuer à l’apaisement qui est nécessaire pour la réussite de ces assises. Vraiment vous vous trouvez actuellement dans une situation très très très difficile et je crains ce qui pourrait se passer que les assises ne réussissent pas. Je trouve, bon les américains sont toujours optimistes, j’étais très très impressionné aujourd’hui par le discours qu’a fait le Président de la République de Madagascar cet après-midi avec un ton apaisant. Je crois que ça peut contribuer beaucoup à la réussite des assises. On a aussi eu des contacts aujourd’hui avec le gouvernement, avec le Premier Ministre, le Ministre des affaires étrangères, ainsi qu’avec le côté de l’ex-maire Andry Rajoelina.
Dia izay aloha ny androany fa dia samy miandry indray izay havoaky ny ampitso sika reketra.
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: 13mai, Ambatomena, Andry RAJOELINA, émeutes, Mahamasina, mouvement populaire, riots, VIVA |	3 Comments »
Fanambaran’i Mgr Odon Razanakolona
Fanambarana nataon’i Mgr Odon Razanakolona androany hariva , tao Antanimena ity aroso ho anareo ity
<blockquote>Nametra-pialana tsy hanohy intsony ny fifampidinihana tamin’ny Alarobia 25 Febroary satria noheveriko fa tsy feno ny fepetra ilaina hahatomombana ny fihaonana…Niverina ihany aho tato aoriana noho ny fiangaviana avy amin’ny firenena mikambana mba handraisako indray io andraikitra io. Nametraka ireo fepetra ireo aho, izay nankatoavin’ny rehetra teo anatrehan’ny solotenan’ny Firenena Mikambana ary teto amin’ity toerana ity. Ka ny voalohany tamin’izay dia hoe hajanona ny fanenjehana, fisamborana, fitifirana sy ny famonoana olona. Avela haneho hevitra malalaka ny vahoaka, avela malalaka hanao ny asany ny haino aman-jery rehetra mba hampahafantatra ny vaovao marina sy ny zava-misy. Ankehitriny, tsapako fa tsy dia tanteraka ireo fepetra ireo ary mainka miha-mahery vaika aza ny zava-mitranga toy ny teny Antaninarenina tamin’ny 7 Febroary. Ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny blindés, ka nahafatesana olona teny Anosy ny 19 Febroary. Ankehitriny dia ireto ny zava-mitranga:
Voalohany ny teto an-drenivohitra sy ny an-tanàn-dehibe. Sakanana ny fanehoan-kevitra sy ny fihetsiketsehana rehetra. Ampihorohoroana ny vahoaka amin’ny alalan’ny fanapoahana fitaovam-piadiana, na any an’elakelan-trano, na any amin’ny faritry ny sekoly, na any amin’ny toeram-pitsaboana. Ary tsy vitsy ireo voatifitra namohy ny ainy na naratra. Enjehina sy samborina ary ampijaliana izay rehetra mitady haneho hevitra. Etsy andaniny, sembatsembanina sy ajanona ireo hainoaman-jery milaza ny zava-misy amin’ny vahoaka. Etsy ankilany anefa, mahazo vahana sy manao ny danin’ny kibony ny hainoaman-jery hafa mandrangitra sy mampirisika ny ady sy ny fifandonana.
Faharoa any ambanivohitra. Manjaka ny herisetra sy ny vono olona amin’ny alalan’ny fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny nahazo ny renim-pianakaviana mpandraharaha tao Arivonimamo, sy ny famonoana ny ben’ny tanàna tao Alarobia any Antanamalaza.
Noho izany dia mbola hamafisiko eto ny fanambarana izay efa nataoko, fa izay no asan’ny mpaminany na dia mietny any an’efitra izy: Voalohany, ajanony ny herisetra sy ny famonoana olona. ajanony ny fanenjehana sy ny fampihorohoroana. Ianareo mpitandro ny filaminana: aoka ianareo ho tena mpiaro marina ny vahoaka sy ny fananany. Ianareo tafi-bahoaka tandroka aron’ny vozona, tsy manome baiko anareo aho sanatria fa miangavy anareo, raiso ny andraikitrareo: arovy ny vahoaka. Isika vahoaka, aoka hiray hina hametraka ny fandriam-pahalemana eo amin’ny faritra misy antsika tsirairay avy.
Ny tenako kosa dia mbola vonona ny hanohy ny fanelanelanana hatramin’ny farany. Ary ankiniko amin’ny vavaky ny Masina Maria mpiaro an’i Madagasikara sy ny fanorohan’ny Fanahy Masina ny ezaka rehetra ataontsika amin’ny famerenana indray ny fandriampahalemana mba hiadanan’ny vahoaka malagasy manontolo.
Dia toy izay sy toy izay ny amin’iny, fa mbola mirefotra foana kosa ny basy ary mitohy ny famakiana barazy eny Ambatobe sy Analamahitsy eny. Vahoaka marobe no namaly ny antson’i Andry amin’ny fiarovana ny ainy… Nisy helicoptère nisidina in’enina iny faritra misy ny toeram-ponenan’i Andry Rajoelina iny. Niteraka ahiahy sy fisavoritahana teo amin’ireo andrimasompokonolona ihany moa izany. Nisy roa voasambotra tamin’ireo mpanao andrimaso, ka raha iny teny am-pandosirana iny ny iray no nilatsaka avy any aminy any ny Cocktail Molotov…Raha tonga teny an-toerana nihaona tamin’i Andry moa androany maraina ny solontenan’ireo masoivoho vahiny rehetra miasa sy monina eto Madagasikara mba handresy lahatra azy hanohy ny fifampidinihana, dia niveri-maina nody satria tsy nety hanohy intsony izany fifampidinihana izany izy.
Raha ny mpanararaotra ny tolom-bahoaka sy ny mpandroba no nampiasa loha ny mponina teo aloha, dia ny tafika kosa ankehitriny no lasa « horohoro » manerana ny tanàna. Mampiasa herisetra eran’ny tanàna, eny fa na dia amin’reo mpandalo tsy maninon-tsy maninona aza. Aza mba tratry ny herisetrany fa dia na ianao asitrika milomano anaty rano maloto, na ianao mizaka ny vely vodi-basy sy ny hitsaka tsy misy indra fo. Fangaron-tsakafo eny anelanelany eny ny ompa reny sy ny teny ratsy isan-karazany… Raha ny fitantaran’ny dadatoan’ilay vehivavy mpianatra eny Ankatso maty omaly izao no raisina, dia olona avy any anaty Cyber ilay zazavavy no nosintonina hivoaka, ary avy eo dia elanelana 2 m no nitifirana azy teo amin’ny tratrany. Asa raha mba olona misy fanahy ihany ny tahaka izany, na efa mifanahim-biby. Tsy omena tsiny anefa ry zalahy, fa hatramin’izay tokoa dia ny lutte anti-acridienne no nahazatra azy, koa angamba noheveriny fa mitovy ny mamono valala sy ny mamono ain’olona. Mbola resin’ireny vehivavy tsy sahy manapaka tendan’akoho ireny ry zalahy raha fahendrena sy fananam-panahy no tarafina amin’izato fihetsika feno fahasahiana sy tsy ampy famadibadihana va o tanterahana.
Fa hiverina kely amin’ilay tenin’i Mgr Odon R. aho momba ny haino aman-jery manao hoe :
<blockquote<Etsy andaniny, sembatsembanina sy ajanona ireo hainoaman-jery milaza ny zava-misy amin’ny vahoaka. Etsy ankilany anefa, mahazo vahana sy manao ny danin’ny kibony ny hainoaman-jery hafa mandrangitra sy mampirisika ny ady sy ny fifandonana.</blockquote>
Na dia tsy milaza mivantana ny anaran’izany hainoamanjery manao ny danin’ny kibony izany aza izy (satria an’ny tompom-pahefana), dia aleo lazaiko eto izay tsy sahiny lazaina fa ny RADIO MADA sy ny tahaka azy no tiany hambara. Izay moa no mba tombony amin’itony mitoraka bolongana itony. Ka asa raha ny filazako an’izany koa no hahitako loza amin’ny manaraka, fa ny marina tsy maintsy ambara. Raha ny andron’ny Alakamisy omaly fotsiny no lazaiko momba io Radio iray io, dia faly ery ireo mianadahy mpanentana ao rehefa misy antso an-telefona mihantsy ady sy fifandrafiana avy amin’ireo mpihaino lian-drà(izay toetra tsy mbola hita hatrizay tamin’ny ankamaroan’ny Malagasy), ka izy ireo indray avy eo no manisy sira sy manampy trotraka. Efa ela nimenomenonana teo ampihainoana azy aho (satria Radio-na mpiara-miasa ao amin’ny birao ilay izy ka sarotra ho an’ny tena ny hiteny hoe mba ovao, ary fantatro rahateo fa tsy hanaiky velively ilay ranamana satria mpomba tsy misy fepetra ny mpitondra amin’izao fotoana izy), dia asa na nisy niteny sy nananatra tany ambadika tany izy mianadahy etsy ambony iretsy, na niniana natao mihitsy ny hoe tsy hisakana sy hitondra fanamarihana raha tsy efa elabe aty aoriana, fa dia ‘mody‘ mba niteny ilay kalakely tao hoe:
<blockquote>Aoka isika miantso mba tsy hanao fihantsiana sy fandrahonana rehefa miantso aty amin’ny onjam-peo, sns…</blockquote>
Nefa talohan’izay, hafaliana ho azy sy ilay zalahy mpanentana ny fandaharana ery ny mamaky ny SMS rehefa feno fihantsiana alefa ao amin’ilay RADIO MADA.
Raha miteny ireo rehetra ireo aho, tsy fankahalana « bêtement » ny 100.8 Fm sanatria, fa ny fisian’ny « deux poids, deux mesures » eto amin’ny tany sy ny fanjakana no efa niteraka ny olana goavana atrehintsika ankehitriny, ka mbola hotohizana ve ny sahala amin’izany?Sa rehefa ahy dia volamena, fa rehefa an’ny hafa dia taim-piraka?
Eo amin’ilay fahaizan’ny tsirairay mandinika koa moa no tena hita ho lesoka lehibe rehefa mba mijery na mandray zavatra. « ny esprit de discernement » no tiako hambara eto. Diso mampihatra ny fanatisme loatra na ny andaniny na ny ankilany, ka tonga amin’ny hoe
<blockquote>rehefa tsy tiako dia tsy tiako hatramin’ny tsinay maintiny, ary rehefa tiako dia laniko hatramin’ny ta..ny.</blockquote>
Azafady fa diso tsipelina iny.
Rehefa mba hita re rey olona fa tsy mety, eny fa na vadin’ny tena aza, dia lazao azy fa tsy mety ny ataony a! Ary rehefa mba misy mety, na avy amin’izay tsy mpifampitantana aminao isanandro aza, dia ambarao ny tsara vitany. Fa aza dia sahala amin’ny soavaly mitarika kalesy, ka izay tandrifin’ny tampi-maso ihany no heverina fa hany làlana azo izorana. Sao any anaty rano no hidoboka ny kalesy no iafaràny.
Aleo hajanoko amin’izay fa toa lasa nivaona be nefa resaka fanambaràna no saika hampitaina.
Veloma daholo, samia tsara
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: Andry Rajoelina; liberté, démocratie, demokrasia, fahalalahana, mouvement populaire, négociations, Odon Razanakolona, riots, VIVA |	Leave a comment »